Jawaab Degdeg ah: Sida Ogsajiinta Loogu Galiyo Biyaha Kalluunka Aan Lahayn Pump - Baaskiil Baaskiil
Bogga ugu weyn » Kaladuwan » Jawaab Degdeg ah: Sida Ogsajiinta Loogu Galiyo Biyaha Kalluunka Aan La Soo Shubin
Sideen ugu dari karaa ogsijiinta haanta kalluun la'aanteed?
Kalluunku ma ku noolaan karaa biyo la'aanteed hawo la'aan?
Sidee baad si dabiici ah u Ogsajiin biyaha?
Sideen Ogsajiinta u galiyaa haanta kalluunkayga?
Intee in le'eg ayuu kalluunku noolaan karaa iyada oo aan la helin bamka oksijiinta?
Haamaha kalluunka ma u baahan yihiin ogsijiin?
Shaandheeyaha ma geliya ogsijiinta biyaha?
Sideed u daryeeshaa kalluun la'aan oksijiin?
Kalluunku ma noolaan karaa filtar la'aan?
Haamaha kalluunka ma waxay u baahan yihiin bambooyinka hawada?
Sideen ku ogaan karaa in kalluunkaygu u baahan yahay ogsijiin dheeraad ah?
Kalluunku ma ku noolaan karaa biyaha tuubada?
Guppy ma noolaan karaa bamka hawo la'aan?
Kalluun noocee ah ayaan u baahnayn haanta ogsijiinta?
Immisa Ogsajiin ah ayuu kalluunka u baahan yahay?
Miyaan u baahanahay bamka oksijiinta haddii aan haysto filtar?
Miyuu kalluunka dahabku u baahan yahay bamka hawada?
Ilaa intee ayuu kalluunku noolaan doonaa filtar la'aan?
Kalluun noocee ah ayaan u baahnayn filtar?
Kalluunku ma jecel yahay xumbo?
Waa maxay sababta kalluunku u joogo meesha ugu sarreysa taangiga?
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu hakin karo biyaha ku jira aquarium-kaaga iyada oo aan lahayn bam waa in la isticmaalo weel ama koob. Kaliya ku buuxi ashuun ama koob biyaha aquarium-ka, kor u qaad si fiican oo sare, oo biyaha dib ugu shub. Biyuhu waxay soo qaadi doonaan ogsijiinta inta ay u socdaan taangiga, sidaas darteed waxay gelinayaan ogsijiinta biyaha.
Siyaabaha Loo Ogsajiin Kalluunka Haanta Kalluun La'aanteed Ku dar Dhirta Aquarium-ka nool. Isticmaal filtar xoog leh oo leh heerka socodka la hagaajin karo. Kordhi kicinta oogada biyaha. Kordhi aagga biyaha oo dhan. Kalluunka ku dabaasha hagi karo heerar kala duwan. Biyuhu way beddelaan/habka koobabka (xaalad degdeg ah).
Matoorada hawadu waxay ku qasbaan ogsijiinta haantaada iyagoo kordhinaya kacsanaanta dusha sare si kalluunkaagu u yeesho O2 badan oo uu ku neefsado. Xaalado badan, dadka ku nool aquarium uma baahna ogsijiinta dheeraadka ah waxayna si fiican u nool yihiin iyagoon haysan bamka hawo.
Ogsajiin waxa ay biyaha ku soo gashaa fidinta hawada, dabaysha iyo waxqabadka hirarka iyo photosynthesis dhirta. Heerarka ogsajiinta ee kala dila waxa lagu kordhiyaa dabaysha iyo ficilka hirarka, ku darida dhirta biyaha iyo u bandhigidda biyaha ogsijiinta la safeeyey.
Sida ugu fiican ee loo kordhiyo ogsijiinta waa in la kordhiyo bedka sare ee aquarium-ka. Kordhi kacsanaanta dusha sare ama dhaqdhaqaaqa biyaha dusha sare. Tani waxay u oggolaanaysaa ogsijiin badan inay milmaan iyo kaarboon laba ogsaydh oo badan si ay u baxsadaan. Waxa kale oo aad ku dari kartaa il ogsijiin cusub adiga oo ku rakibaya bamka hawada.
Kalluunka Goldfishka iyo qaraabadooda kaarbuska duurjoogta ah waxay noolaan karaan shan bilood iyaga oo aan neefsanin ogsijiin - haddana waan ognahay sida. Kalluunku waxa uu soo saaray unugyo ensaymes ah oo marka heerarka ogsijiinta hoos u dhacaan, ugu dambayntii waxa ay ka caawisaa in karbohaydraytyadu u beddelaan aalkolo ka dibna lagu sii daayo guntimaha.
Sidee bay muhiim ugu tahay ogsijiinta ku jirta aquarium-ka? Sida cad, kalluunku wuxuu u baahan yahay ogsijiin uu ku neefsado, dhirtu waxay u baahan tahay ogsijiin habeenkii iyo bakteeriyada faa'iidada leh waxay u baahan tahay ogsijiin si ay u burburiso (oxygenate) qashinka. Asal ahaan wax kasta oo dhinta ama qudhma ee ku dhex jira aquarium-ka waxay u baahan yihiin oo sidaas darteed demiya ogsijiinta.
Shaandheeyayaashu waxay aad u fogeeyaan kordhinta ogsijiinta biyaha, maadaama ay sababaan dhaqdhaqaaqa biyaha dusha sare halkaas oo isweydaarsiga ogsijiinta uu ka dhaco. Shaandheeyayaashu waa inay qaataan biyaha hoose ee taangiga, oo ay dib ugu sii daayaan aquarium-ka dusha sare, sidaas darteed qaybinta biyaha ogsijiinta leh oo dhan.
Tayada Biyaha iyo Daawaynta Iska ilaali taabashada kalluunkaaga dahabka ah marka aad bedesho biyaha ama nadiifiso baaquli. Kalluunkaaga u wareeji haan gaar ah oo haynta. Ka saar qashinka substrate-ka adigoo si tartiib ah u dhaqdhaqaaji dhagaxyada. Sii baaquli nadiifin wanaagsan. Ku dar biyaha heerkulka qolka ee la sii daweeyay (ugu yaraan 50%).
Waa inaad jadwal u sameysaa isbeddelada biyaha qayb ahaan hal mar 3 ilaa 5 maalmood si aad u hubiso in kalluunkaagu uu nolol caafimaad leh oo farxad leh ugu noolaado haantaada aan sifaynta lahayn. Kalluunku wuu noolaan karaa filtar la'aan, laakiin hubaal kuma noolaan karaan biyaha mugdiga ah ee ogsajiinta.
Bamka hawadu wuxuu ku daraa oksijiinta aadka loogu baahan yahay aquarium-ka si uu kalluunka u neefsado iyo sidoo kale siiya ogsijiinta bakteeriyada ka caawinta habaynta Ammonia. Bamka hawada hawo ee haanta kalluunka ayaa muhiim ah oo wax badan u qaban karta aquarium-kaaga.
Calaamadda ugu badan ee sheegaysa in kalluunkaagu u baahan yahay ogsijiin dheeraad ah waa haddii aad aragto iyaga oo ku neefsanaya dusha sare - waxay sidoo kale u muuqdaan inay dib u soo celinayaan soosaarka shaandhada. Meeshan taangigaagu waxay u janjeertaa inay lahaato fiirsashada ogsijiinta ee ugu sarreysa maadaama ay u dhowdahay meesha ugu dhibka badan.
Biyaha qasabada ee caadiga ah waxay ku fiican yihiin buuxinta aquarium-ka ilaa iyo inta aad u ogolaanayso inay fadhiistaan ​​maalmo badan ka hor intaadan ku darin kalluunka (koloriinta ku jirta biyaha tuubada ayaa dili doonta kalluunka). Dhawr dhibcood oo xalka ah ee ku jira biyaha tuubada saafiga ah ayaa caadi ahaan ku filan in ay biyaha ka saaraan koloriinta isla markaaba.
Isticmaalka dhirta Biyaha nool si aad Ogsajiinta ugu soo saarto Aquarium kaaga Adigoo isticmaalaya dhirta nool, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto nidaam deegaan oo iskiis u nool, kaas oo aan u baahnayn hawo-dhagax ama bamka biyaha. Guppies waxay cuni doontaa oksijiinta biyaha waxayna sii deyn doontaa CO2.
Waxaa jira dhowr kalluun oo noolaan kara ogsijiin la'aan. Waxay yihiin bettas, goldfish, tetras, guppies, gouramis, iyo wixii la mid ah.
Kalluunka, carsaanyada iyo lohodka ee ku nool ama ku quudiya xagga hoose waxay u baahan yihiin uruurinta oksijiinta kala diri ee 3 mg/L ama ka badan. Kalluunka tahriibka ah ee soo hayaamaya iyo ukumahooda iyo dirxigooda waxay u baahan yihiin ilaa 6 mg/L inta lagu jiro marxaladahan nolosha xasaasiga ah.
Bamka hawada looma baahna ujeedadan, ilaa iyo inta haantaadu ay sii wado dhaqdhaqaaqa biyaha ku filan oo ay weheliso kicinta dusha sare. Tani guud ahaan waa xaalad haddii shaandhooyin dibadda ah (tusaale, sanduuq ama qasacad) la isticmaalo. Marka labaad, matoorada hawada waxaa loo isticmaali karaa in lagu qasbo biyaha shaandhada (tusaale, isbuunyo ama shaandhada geeska).
Sida la sheegay, kalluunka dahabka ah had iyo jeer uma baahna bamka hawada si uu u noolaado. Waxay si fiican ugu shaqayn kartaa taangi si fiican ogsajiinta u buuxsamay ilaa inta ay sida caadiga ah awooddo. Ilaa inta uu jiro dhaqdhaqaaq ku filan oo dusha sare ah oo u tarjumaya ogsijiinta, markaa kalluunka dahabiga ah wuxuu ku noolaan karaa si fiican iyada oo aan la helin bamka hawada.
Kalluunku waxay cunaan ogsijiinta laga heli karo heerarka hoose ee aquarium-ka. Kadibna waxay bilaabataa inay garaacdo oogada biyaha si ay u hesho ogsijiin badan. Si kastaba ha ahaatee, kalluunku waxa ku jira culays badan waxayna noolaan karaan oo keliya ku dhawaad ​​laba maalmood ka dib marka ay yaraato ogsijiinta.
Kalluunka ugu Fiican Makiinada Aan La Sifeynin Kalluunka Betta (Isticmaal kuleyliyaha) Guppies. White Cloud Minnows. Godka indha la'aanta Tetras. Salt iyo basbaas Corydoras. Zebra Danios. Ember Tetra. Pea Pufferfish.
Sida aniga iyo adiga, kalluunka wuxuu u baahan yahay inuu neefsado. Si tan loo sameeyo, kalluunku waxa uu ka soo saaraa biyaha ogsajiinta kala diri karta - la'aanteed, inta badan noocyada kalluunka ayaa neefta. Xumbooyinku waxay ku daraan ogsijiinta aquarium-kaaga. Marka ay goobooyinku kor u kacaan, waxay kiciyaan dusha sare, taas oo u oggolaanaysa qadar badan oo ogsijiin ah inay soo galaan biyaha.
Kalluunka ayaa laga yaabaa inuu ku raago meel u dhow oogada sababtoo ah wuxuu isku dayayaa inuu si fudud u neefsado. Xasuusnoow, kalluunku waxa uu neefsadaa ogsijiin kala diri-ma aha ogsijiinta hore loogu daray H2O molecule. Dabiici ahaan, heerarkan ogsijiinta ee milmay waxay u muuqdaan inay ka sarreeyaan meel u dhow dusha sare, halkaasoo isdhexgalka hawada iyo biyaha uu ka dhaco.
Su'aal: Kalluunku ma Noolaan Karaa La'aantiis Ogsajiinta
Intee In le'eg Ayaa Kalluunku Noolaan Karaa La'aanteed Bamka Biyaha
Su'aal: Ilaa intee ayuu Kalluunku noolaan karaa la'aantiis Ogsajiinta
Intee In le'eg Ayaa Kalluunka Biyaha Cusub Nool Karaa Ogsajiin La'aanteed
Jawaab Degdeg ah: Intee in le'eg ayuu Kalluunku Noolaa Biyo la'aan
Jawaab Degdeg ah: Intee in le'eg ayuu Kalluunku noolaan karaa Ogsajiin la'aan
Su'aal: Ilaa intee ayuu Kalluunku noolaan karaa iyada oo aan la helin bamka biyaha
Intee In le'eg Ayaa Kalluunku Noolaan Karaa Biyo La'aanteed
Jawaab degdeg ah: Ilaa intee ayuu noolaan karaa kalluun la'aantiis
Su'aal: Muddo intee le'eg ayuu Kalluunka kulaalayaasha ah noolaan karaa Ogsajiin la'aanteed
Ilaa intee ayuu Kalluunka Aquarium-ka noolaan karaa Ogsajiin la'aan